Luminta shaqadaada ama shaqo ka eryid | khayraadka Job ka USAHello | USAHello
Is eryay (badiyay shaqada) waa mid aad u adag. laga yaabo in lagu khaldo Waxaad ku saabsan talaabooyinka aad soo socda. Ogow waxa la sameeyo haddii aad xaq darro ah rasaas, sida loo helo lacagta shaqo la'aanta. Read ku saabsan wixii aad qaban lahayd.
Dadka intooda badan ay shaqo la'aan ugu yaraan hal mar. Is rasaas noqon kartaa waayo-aragnimo aad u cabsi, gaar ahaan haddii ay tahay lama filaan ah. Waxaa laga yaabaa inaad ka welwelsan tahay bixinta biilashaada ama caawinta qoyska. Waxaad samayn kartaa wax in la sameeyo in lagu eryo ama sahlan badiyay shaqada.
Listen and is dajiyaan
Loo-shaqeeyayaasha Ma jecli inaan dab dadka. Sababta ugu badan ee shaqo ka eryid waa lacag. Shirkadda laga yaabaa in aysan haysan lacag ku filan oo ay mar dambe aad bixiso. Ama laga yaabaa in aad ku samaysay wax ka soo horjeeda xeerarka ahaa. Waxaa laga yaabaa in wax aad u sameeyay waxa ay ahayd shil. Haddii aanad fahmin waxa ku dhacay, waxaad ka codsan kartaa. Tababaraha ayaa si sharci ah u leeyahay in uu kuu sheego sababta aad shaqo ka eryid.
Wax kasta oo dhacay, dhegeysto waxa la farayo tababare ee. Waxay rabaan in laga yaabo in aad si isla markiiba ka baxaan. waxaa laga yaabaa in ay doonayaan in aad soo qaado wax aad iyo macasalaameeyo kula shaqeeya oo aad. Ha ooyin, guuxi, ama u dhaqmaan cadhooday. Isku day in aad is dejiso.
Ayaa aad xaq darro ah rasaas?
joojinta cadaalad darro ka dhigan tahay in aad helay eryay sabab sharci darro ah. Baro waxa ku saabsan shaqaalaha’ xuquuqda ee USA. Waad awoodaa bartaan oo ku saabsan xuquuqda shaqaalaha oo ku qoran luqado badan. Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa takoorka shaqada iyo aad u ogaato haddii aad xaq u leedahay magdhawga shaqaalaha.
Haddii aad aaminsan tahay in aad shaqo laga badiyay sababta oo ah takoor, dhaawac shaqada ah, ama dhibaataynta, waa in aad u malaynayso oo ku saabsan la hadashid qareen. Waad awoodaa heli qareenno lacag la'aan ah oo la awoodi karo kuwaas oo ka caawiya muhaajiriinta iyo qaxootiga.
File dheefaha shaqo la'aanta
Haddaad awoodid, gudbiso, waayo, lacagta shaqo la'aanta isla markiiba. Waxtarka shaqala'aanta waa lacagta dawladda ku siiyo ka dib markii aad shaqo la'aan. Gobolada intooda badan ku bixin doono lacagta shaqo la'aanta ilaa 26 todobaad. Ayan iyagu markaas bixin doonaa lacagta mushaar buuxa.
Waxaad xaq u leedahay lacagta shaqo la'aanta haddii aad tahay:
qirtay degganaanta joogtada
sharci ee dalka Mareykanka sababo la xiriira shaqo
siiyo magangelyo joogto ah
Daawo video ah oo ku saabsan sida loo codsado lacagta shaqo la'aanta
Haddii aad shaqo ka tago oo aan shaqo ka eryid, ma waxaad ka heli doontaa lacagta shaqola'aanta laga reebo:
sababo caafimaad - aad u xanuunsado ama dhaawac ay u shaqeeyaan waxaad tahay
Daryeelka xubin ka buka qoyska - Xubinta qoyskaaga waa mid aad u buka oo aadan awoodin inaad bixiso qof in ay is ogow oo iyaga ka mid
Rabshadaha qoyska - Qofka aad ku jirto xiriir la leh waxaa ku dhaawacayo maskax ahaan ama jir ahaan
dheecaan wax dhisid ah - Taas macnaheedu waa in xaaladda shaqada aad ahayd mid aad u adag. Haddii Tababaraha kugu dhuftay ama yeelanayay aad samayn wax sharci daro ah, this tiriyo sida "dheecaan wax dhisid ah."
Gobol kastaa waxa uu leeyahay sharciyo kala duwan oo ku saabsan faa'iidooyinka marka joojinta. Baro lacagta shaqo la'aanta ee gobolka iyo lacagta shaqo la'aanta shaqaalaha soo galootiga ah. Waxaa laga yaabaa in ay noqon kale manfacyada dadweynaha aad xaq u leedahay iyo sidoo kale.
Sameyso miisaaniyad xitaa haddii aad hesho lacagta shaqo la'aanta. Ka feker sida aad u badbaadin karaan qaar ka mid ah lacag. waxaad bedeli kartaa hab nololeed aad u la lacagta aad haddeer haysatidna ku nool? Waxay qaadan kartaa muddo ah si aad u hesho shaqo cusub. Baro badan oo ku saabsan sida loo sameeyo miisaaniyad si loo badbaadiyo lacag.
La socodsii resume
Shaqooyinka badankood waxay u baahan yihiin arjiga. Hubi in aad resume waa ilaa taariikhda. Ku dar faahfaahinta ku saabsan shaqada kaliya aad ka tagtay. Ku qor xirfadaha kasta oo aad laga yaabaa in baratay inta aad waxaa jiray. Ku dar wax kasta oo fasalada la soo dhaafay aad qaadatay. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida loo sameeyo a resume.
Waxaa wanaagsan inaad nasato dhowr maalmood ka dib shaqo ka eryid. Waxaad qaadan kartaa waqti in aad ka fikirto. Xitaa haddii aad tahay murugo, bilowdo shaqo raadintaada sida ugu dhakhsaha badan ee aad awoodid. Helitaanka shaqo noqon karaa geedi socod dheer oo ay adag tahay. Raadi shaqooyinka online iyo / ama ka eeg calaamadaha ee ganacsiyada maxaliga ah. Bartilmaameed ah oo codsanaya in ay ugu yaraan 10 Shaqooyinka toddobaadkii. badan oo ku saabsan Baro sida loo raadiyaan fursado shaqo.
Waxyaabaha aan la sameynin ka dib shaqo ka eryid
Waxaa jira waxyaabo waxaa wanaagsan in aan la sameynin ka dib shaqo ka eryid.
Ha odhan waxyaabo xun oo ku saabsan cidda aad u shaqayso on warbaahinta bulshada
Xitaa haddii aadan jeclaan aad Tababaraha kooxda, laga yaabaa in aad u baahan tahay tixraac ama cidda aad u shaqayso cusub. Sidoo kale, cidda aad u shaqayso cusub eegto laga yaabaa in aad warbaahinta bulshada iyo ka heli doonaa aragti xun oo idinka mid ah.
Ha joogo ma ay xasilli
Waxaa laga yaabaa inaad ka xishoodaan in aad u sheegto dadka aad shaqo laga badiyay. Taasi waa caadi. Si kastaba ha ahaatee, dadka u sheegaya kaa caawin doona. Saaxiibadaa iyo qoyskaaga u malaynayaa laga yaabaa in aad ka mid ah marka ay maqlaan shaqooyin. Waxaa laga yaabaa inay awoodaan inay kuu soo bandhigo dadka ku caawin kara.
In America, shaqeeyayaasha aadan email adiga kugu saabsan codsiga kasta. Waxaa laga yaabaa inaad ma maqlaan dib uga dadka haddi aanay iyagu doonayn inaad waraysi. Tani macnaheedu ma aha in aadan tahay shaqaale fiican ama in aad marnaba heli doonaan shaqo. Waa wax caadi ah in ay ka careysan, laakiin ha kaa joojiso in aad isku dayaya in ay hesho shaqo cusub,.